यो यस्तो परिवार जसका एकै कोखका ६ छोरी पीएचडी प्राप्त वैज्ञानिक भए : कोही अमेरिका, कोही अष्ट्रेलियाका सरकारी जागिरे – List Khabar
Home / समाचार / यो यस्तो परिवार जसका एकै कोखका ६ छोरी पीएचडी प्राप्त वैज्ञानिक भए : कोही अमेरिका, कोही अष्ट्रेलियाका सरकारी जागिरे
यो यस्तो परिवार जसका एकै कोखका ६ छोरी पीएचडी प्राप्त वैज्ञानिक भए : कोही अमेरिका, कोही अष्ट्रेलियाका सरकारी जागिरे
admin May 27, 2021 समाचार Leaveacomment 59 Views
काठमाडौं । आजका दिनमा केही कम भएको भए पनि हाम्रो समाजमा छोरीहरू बोझ हुन भन्ने मान्यता रहेको छ । तर ढुक्क हुनु भए हुन्छ छोरीहरु कहिल्लै तपाईंका लागि बोझ हुँदैनन् । छोरीहरुलाई पनि छोरालाई झैं पढ्ने, लेख्ने र अगाडि बढ्ने मौका दिनुहोस्, त्यसपछि हेर्नुहोस् कि शिक्षा र कडा परिश्रमले तपाईंको छोरीले सफलताको नयाँ कथा लेख्न समय लगाउने छैनन् ।
आज हामी त्यस्तै एक परिवारका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ । यसको एउटा उदाहरण जगदेव दहियाको परिवार हो । भारत, हरियाणाको सोनीपत जिल्लाको मदना गाउँ निवासी जगदेव दहियाकी छ छोरीहरू छन् । सबैको हातमा पीएचडी डिग्री छ । सबै छोरीहरु वैज्ञानिकहरू हुन् । ६ जना छोरी मध्ये ५ जनाले सरकारी जागिर खाइरहेका छन् । तीमध्ये चार छोरी क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकामा कार्यरत छन् ।
मजाक उडाउनेहरु गौरव गर्छन्
जगदेव दहिया भन्छन्, ‘कहिलेकाँही समाज र आफन्तहरु छोरीहरुतर्फ हेर्दै मजाक उडान खोज्थे । छोरीहरुलाई किन धेरै पढाउँदै छौँ, के अधिकारी बनाउने विचार छ ? भनेर छोरीहरुको समयमा नै विवाह गर्दिन दबाब दिने गरेका थिए । तर उनले समाज र आफन्तको कुरा नसुनेर आफ्ना छोरीहरुको कुरामा ध्यान दिएका थिए । जगदेवका अनुसार अब छोरीहरू वैज्ञानिक भएर विदेशमा काम गरिरहेका छन् । अहिले तिनै आफन्त र गाउँलेहरु छोरीहरुको सफलतामा गर्व गरिरहेको जगदेवले बताए ।
१, डा. संगीता सिंह : जेठी छोरी संगीताले भौतिक विज्ञानमा पीएचडी गरेकी छन् । अहिले उनी जीवीएम कलेज, सोनीपतमा सहायक प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत छिन् । उनले महाप्रयोग परियोजनामा ​​पनि योगदान दिइसकेकी छिन् । यस बाहेक, उनी अमेरिका र अष्ट्रेलियामा दुई पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलनहरूमा भाग लिन गइसकेकी छिन् । ति सम्मेलनहरुमा संगीताको शोध पत्रमा छलफल पनि गरिएको छ । संगीताको विवाह रितल गाउँका सुरेन्द्र सिंहसँग भएको छ । पति सुरेन्द्र आईएफएफकेओ टोकियोमा काम गर्दछन् ।
२, डा. मोनिका सिंह : माइली छोरी मोनिकाले जैविक विज्ञानमा पीएचडी गरेकी छिन् । हाल मोनिका सिंह क्यानाडाको टोरन्टो राजीव दादरी निवासी पति पवन सांगवानसँग स्पेयर पार्ट्सको व्यवसाय सम्हाल्छिन् । यस अघि उनी टोरन्टोमा सरकारी काममा अनुसन्धान गर्थिन् । उनले आफ्नो व्यवसायको लागि काम छोडेकी थिइन् ।
३, डा. कल्पना दहिया : साइली छोरी कल्पनाले गणित विषयमा पीएचडी गरेकी छिन् । हाल युआईटी चन्डीगढमा सरकारी प्रोफेसरको रूपमा अनुसन्धान गर्दै आएकी छिन् । क्यानाडा र अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि उनको शोध पत्रमाथि छलफल गर्ने गरिएको छ । उनका पति डा. अनुज चन्डीगढको पञ्जाब विश्वविद्यालयमा कम्प्युटर प्रोफेसर छन् ।
५, डा. डेजी दहिया : जगदेवकी ठाँईली छोरी पनि गणित विषयमा पीएचडी धारक हुन् । फिल बार यूएसए वाशिङ्टन डीसीको इन्स्टीट्यूट अफ हेल्थमा खोजकर्ताको रुपमा काम गर्दै आएकी छिन् । तपाईंलाई जानकारी गराउ कि डेजी अझै अविवाहित छिन् ।
६, डा. रुचि दहिया : कान्छी छोरी रुचि दाहिया पनि ठूली दिदीबहिनीको पदमार्गमा छिन् । उनी अमेरिकाको एरिजोना राज्यमा अनुसन्धान गरिरहेकी छिन् । अविवाहित रुचिले पनि गणित विषयमा पीएचडी गरेकी छिन् ।
विदेशमा कसरी पुगे छोरीहरु : जगदेवका अनुसार मोनिका सिंह विवाह पछि आफ्नो पतिसँग क्यानडा गईन्, त्यहाँ उनलाई सरकारी जागिर मिल्यो । अन्य छोरीहरूले हरियाणामा बस्दा अनलाइन आवेदन दिएर सरकारी जागिर पाएका हुन् ।
जगदेव दहिया हरियाणाको च्याउम्यान
जगदेव दहिया एक उत्कृष्ट शिक्षकको साथसाथै हरियाणाका एक चर्चित च्याउ खेती गर्ने व्यक्ति पनि हुन् । उनीहरूको दाबी छ कि हरियाणामा च्याउ खेती उनीहरूको पेशा हो । सन्‌ १९८० देखि जगदेवले हरियाणामा च्याउ खेती गर्न थालेका हुन् ।
हिमाचल प्रदेशको सोलनबाट च्याउ खेतीको प्रशिक्षण लिएर आएपछि हरियाणामा किसानहरूलाई प्रशिक्षण पनि दिन थालेका छन् । उनी १९९२ देखि १९९८ सम्म भारतको च्याउ संस्थानका उपाध्यक्ष पनि रहेका थिए ।
Previous आफ्नो पछि लागेका दुई युवकको कुरा नमान्दा मृत्यु भयो यी युवतीको
Next दुध बेसार आपसमा मिश्रण गरेर पिउनुको यति धेरै चमत्कारी फाइदाहरु !